नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : निर्वाचन आयोगले मनपरी खर्च गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि खर्च विवरण सार्वजनिक !
निर्वाचन आयोगले मनपरी खर्च गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि खर्च विवरण सार्वजनिक !
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । चुनावको लागि सरकारले १० अर्व रुपैयाँमध्ये ३० करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रकमान्तर गरिएको र ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै चुनावी खर्चको लागि छुट्याइएको आयोगले जनाएको छ । ९ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये पुस २१ गतेसम्म ५ अर्व ६२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । खर्च भएको रकममध्ये ७७ जिल्लामा ४ अर्व ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ दिइएको र बाँकी रकम आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गरेको छ । सरकारले दिएको बजेटमध्ये अब ४ अर्व ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बचेको र यो पैसाले राष्ट्रियसभा चुनाव र
राष्ट्रपती तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने आयोगले जनाएको छ ।